Waa maxay Samsung Kies Air?
Kies Air, by Samsung waa qalab kala iibsiga xogta wireless. Kies Air ayaa halkii ay noqdaan huriye hadda, sida App mar dambe laga heli karaa Store Play Google ama barnaamijyadooda Samsung laakiin qaar ka mid ah websites xisbiga saddexaad weli marti apks iyo files Mudanayaasha loo baahan yahay si loo soo dajiyo Kies Air. Kies Air waxaa loogu talagalay wada xiriirka ka dhexeeya wireless qalabka Samsung oo laptop ah ama desktop suurto gal ah. Kies Air u suurta laba qalabka on network isla in ay ku xidhmaan iyo isgaadhsiin via browser. Kies Air ayaa la diyaariyey kaliya ee qaar ka mid ah Samsung telefoonada smart taas oo ah sababta ugu Mudanayaasha / apks sidoo kale loo soo dajiyo oo keliya qalab la doortay. Mudanayaasha ayaa lagala soo bixi karaa lacag la'aan ah ka halkan .
Qalabka ay taageerayaan, qalabka Samsung socda Android version 2.2 in 4.1
Software loo baahan yahay: Samsung Kies Air APK
Sida loo soo dejisan iyo rakibi Kies Air aad Samsung?
Connect qalab Samsung in aad laptop ama desktop via cable USB ah.
Download apk Samsung Kies Air isticmaalaya link kor ku bixiyo.
Bedelka apk ka soo bixi aad laptop ama desktop in aad Samsung phone smart.
Dul kaydinta telefoonka iyo garto apk Samsung Kies Air; jaftaa ku yaal si ay u rakibi ku saabsan qalabka Samsung.
Codsiga waxaa weydiin doonaa rukhsadda oo aad markii hore ku siin ogolaanshaha loo baahan yahay Samsung Kies Air lagu rakibi doonaa in aad qalab Samsung.
Sida loo isticmaalo Kies Samsung
Sidii hore loo sharxay, Samsung Kies Air, ka duwan file kale si toos ah loogu wareejiyo orod software ka browser ee laptop ama desktop oo isku xirta laba qalabka on shabakad isku mid ah. Si aad u bilaabaan inay isticmaalaan Samsung Kies Air, raac tilmaamaha fudud:
Orod Kies Samsung aad Samsung phone smart iyadoo ku xiran yihiin shabakad. Waxay ku siin doontaa ah Ciwaanka IP: ga gudaha in aad u baahan tahay si ay u galaan caleenta qalab kale oo aad doonayso in aad ku xirmaan aad casriga Samsung.
Fur browser aad laptop ama desktop iyo geli Ciwaanka IP: ga ay bixiso codsiga Samsung Kies Air in bar raadinta iyo ku dhuftay galaan.
Ilaa pop A ka muuqan doontaa telefoonka weydiinaya haddii aad rabto in ay ku xidhmaan aad laptop ama desktop, ka jaftaa "Okay" in ay sii wadaan.
Screen A la mid ah mid ka mid ah hoos ayaa lagu muujiyey muuqan doonaa macluumaad ku saabsan dhammaan macluumaadka ee aad telefoonka. Ma muraayad shaashadda telefoonka aad aad laptop ama desktop Waxaad karo, u arkaan sawirada, videos, xiriirada iyo Guda wac isla markiiba.
Su'aalaha ku saabsan Samsung Kies Air
Samsung Kies Air ayaa sheegay in aan u baahanahay in Java download files kala duwan, laakiin aan hore u leeyihiin Java 7 update 51
Dhibaatada waxaa sababa marka update Java 51 ee isticmaalka aan la karti loo siiyaa biraawsarkaaga ah. Si taas loo hagaajin:
Tag goobaha biraawsarkaaga iyo maraan si aad u hesho liiska "fur-tago" ku tilmaamay. Scroll si aad u hesho Java. Eeg haddii Java ayaa karti, haddii kalese way awood.
Fariin Kies Air aan shaqayn
Tani waxaa sababa ay sabab u tahay qalad ah server Kies gudaha iyo waxba u qaban aad aad casriga Samsung ama laptop ama desktop. Waxaa wax laga xumaado, xal cad oo ku saabsan dhibaatada aan la heli karin, laakiin waxaa jira joogo kahyraadka kale oo kuu oggolaanaysa in aad ficil ahaan u sameeyaan wax la mid ah, laakiin aan khaladaad kasta. Download Mudanayaasha MobileGo ku on your computer, mar download waa dhameystiran u soo dajiyo. Marka bilaabay codsiga waxaad arki doontaa in Wondershare MobileGo uu leeyahay muuqaalada isla sida Samsung Kies Air lagu daro qaar ka mid ah uqaadineed run ahaantii weyn. Waxaad hadda kartaa qof kasta oo isticmaalaya farriin Wondershare MobileGo.
Marka laga reebo feature Fariin ku, Wondershare MobileGo kale oo uu leeyahay shaqooyin badan oo xiiso leh sida gurmad, mirroring iyo mid click kala iibsiga file heli karo. Waxaa sidoo kale nadiifiye ah oo loo dhisay in ay qaadataa daryeelka xusuusta aad telefoon smart. Qaybta ugu fiican waa in Wondershare MobileGo kuma koobna smartphone Samsung oo keliya; Ma la socon karaa kasta casriga ah oo ka shaqeeya caqligiisu labada daaqadaha iyo Mac ka hawlgala nidaamyada.
Codsiga Kies Air Four Wixii Security?
Xannibaadda Tani waxaa sababa update Java ay ku jirto shahaadada ammaanka la xoojiyay. Si taas loo hagaajin:
1. Tag Java gacanta goobaha guji tab ay ku calaamadeysan tahay "Advance".
2. Scroll hoos ku hagayaan "Qabtaan Checks noqoshada Certificate" Fiiri sanduuqka oo u dhigma "ma hubi" oo guji codso.
3. Guuleysatey biraawsarkaaga iyo geli URL ay bixisay Kies mar kale. Waxay ku weydiin doonaa haddii aad hubtid iyo aad rabto in aad u ordo, ka dhacay haa.
> Resource > Samsung > Samsung Kies Air, Share Files dhexeeya Samsung casriga ah iyo Computer Your